Ăn gì ở Sapa? Ghim ngay Top 23 quán ăn ngon ở Sapa nổi tiếng nhất | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Ăn gì ở Sapa? Ghim ngay Top 23 quán ăn ngon ở Sapa nổi tiếng nhất | Excitinghochiminhcity
Sapa haina kungova nemifananidzo yakawanda yakanaka asiwo akawanda ane mukurumbira hunyanzvi. Ndokusaka nzvimbo ino ichikwezva vashanyi vazhinji gore rega rega. Heino chidimbu chepamusoro 23 chikafu chinonaka muSapa yereferensi yako usati waenda.
1 Maresitorendi epamusoro makumi maviri nematatu ane mukurumbira muSapa
1.1 1. Inonaka Sapa Restaurant
1.2 2. King Sturgeon House
1.3 3. Northwest Sapa cuisine restaurant
1.4 4. Dong Tien ruva -29 Cau May – Sapa – Lao Cai
1.5 5. Hoa Dao -48 Le Van Tam – Sapa – Lao Cai
1.6 6. Chapa-40 Cau May – Sapa – Lao Cai
1.7 7. Mr. Duc Sapa – 47 Xuan Vien – Sapa – Lao Cai
1.8 8. Sapa Silver Waterfall Restaurant – Km 12 Thac Bac nzvimbo yevashanyi – Sapa
1.9 9. Hoang Minh -23 – 24 Food court Sapa – Sapa – Lao Cai
1.10 10-Moment Romantic- 026 Muong Hoa, Sapa, Lao Cai
1.11 11- Moment Romantic pa26 Muong Hoa – Sapa
1.12 12- Lacasa Viet Cuisine Restaurant pa14 Cau Chivabvu – Sapa
1.13 13- Sapa Lotus pa34 Cau Chivabvu – Sapa
1.14 14- Little Sapa Restaurant pa18 Cau Chivabvu – Sapa
1.15 15- Song Nhi Restaurant muSilver Falls – Sapa
1.16 16- Red Dao resitorendi pa4B Thac Bac
1.17 17- The Hill Station Singnature Restaurant pa37 Fansipan – Sapa
1.18 18- Red Camelia Resitorendi pa30 Cau Chivabvu
1.19 19- Delta resitorendi pa33 Cau Chivabvu
1.20 20- Aroma restaurants Pizza padyo neCau May, Sapa dhorobha
1.21 21. A Phu Restaurant -15 Fansipan – Sapa – Lao Cai
1.22 22. Do Quyen Restaurant – Kero: Fansipan peak – Sapa – Lao Cai
1.23 23. A Quynh -15 Thach Son – Sapa – Lao Cai
Maresitorendi epamusoro makumi maviri nematatu ane mukurumbira muSapa
Chikafu chakanakisa muSapa
1. Inonaka Sapa Restaurant
Kero: 32 Cau May Street, Sapa Town, Lao Cai Province
Nhamba yenhare: 0911 190 987
Sapa inogara yakanaka kubuda, mhepo pano yakachena, mamiriro ekunze ezhizha achiri kutonhora. Mumamiriro ezvinhu aya, kudya poto yethang co, kunwa waini shoma kunonyanya kushamisa. Irowo runako kwandiri kana ndiripo zvachose kuti ndisarudze resitorendi paCau May street.
Pane maateries akawanda mumugwagwa uyu, kunze kwatosviba Inonaka Restaurant Sapa Magetsi ari kupenya, nzvimbo yacho yakapamhama, asi chitoro chakazara vanhu, saka ndakafunga kuzvisarudza. Pakutanga, ndichipfuura nepakati peimba yekubikira, yaitaridzika kukwezva, saka ndakafunga kuodha seti yeakakanyiwa skewers, imwe neimwe skewers chete kubva ku10k. Muridzi anobika nekukurumidza, kumirira maminetsi mashoma kuti uwane chikafu.
Takasarudza kugara pedyo nesuo, uye patakatarisa mukati-kati, takaona tafura yakati sandara. Chitoro chinotaridzika chakachena, dhizaini iri nyore, ine mamwe mashoma emadziro ekupenda nezveSapa. Menyu iri pano izere nehunyanzvi hwepamusoro, kusanganisira grilled skewers hot pot, sturgeon hot pot, salmon, nhema huku inopisa poto, Ban pig, Thang Co, highland bhiza ndiro uye kunyange yakakurumbira mupunga.
READ Cách làm khô bò đen từ tim và gan bò ngon miễn chê | Excitinghochiminhcity
Ndakahodha tumaskewer twakagochwa ndichibva ndati poto yethang co, zvigubhu zvishoma zvedoro kuti dumbu rangu ridziye. Yakagochwa skewers kutanga, kunakirwa kwacho kwacho handizivi kuti muridzi wenyama yacho akaipisa here maererano nerecipe chaiyo, asi nyama yacho yakapfuma. Thang co imhando yepoto inopisa, ndinotya kuti yakaoma kudya. Asi chitoro chachinja kunze kwehura hudiki, kunezve nyama yakawanda, mvura yakachena, kana yadyiwa nemuriwo, inonaka inonaka asi mutengo wacho uchiri wakachipa.
Uye zvakare, iyo yekudyira inewo poto inopisa yesturgeon, salmon, nyama yenguruve, uye Thang Co iyo zvakare inonaka kwazvo, uye kunyanya iyo yekudyira inopa yakakurumbira mupunga kune vashanyi, inova sarudzo yakapfuma yekunakidzwa ne cuisine kana uchikwira. sapa.
Quan Ngon Sapa iri pa32 Cau May mugwagwa, Sapa dhorobha, Lao Cai mudunhu, iri nyore kuwana. Iresitorendi yakasiya maonero akanaka kwazvo pandiri, saka kana ndikawana mukana wekudzokera kuSapa, ndichashanyira zvakare, edza nzvimbo yekugara uye ndidye menyu yese.
2. King Sturgeon House
Kero: 09- Fansipan – Sapa – Lao Cai
Hotline yekubhuka tafura: 0367371431
Inozivikanwa nekutonhorera, yemashiripiti nzvimbo yevintage uye inonaka inonaka yeNorthwest gomo hunyanzvi, King Sturgeon restaurant yave “nzvimbo inozivikanwa” yegourmets.
Kana iwe ukauya kuSapa munguva yechando inotonhora, asi iwe unogona kusvetukira muresitorendi yeKing Sturgeon, kuraira hotpot inopisa yesturgeon kana hotpot inopisa yesaumoni kana kunwa waini yesango inodziya, une chokwadi cheku “muka” pfungwa dzese. Kuravira kwesalmon ichangotanhwa kunotapira uye kunonaka, kuchiwedzera kuvava kupoto inopisa yakasanganiswa nezvinonhuwirira zvinonaka zvechili newaini, oh zvakanaka… Denga riripo uye hakuna kumwe!
Kunze kweiyo yakakurumbira sturgeon hotpot, King Sturgeon restaurant zvakare ine zvisingaverengeki ndiro dzekunakidzwa kamwe chete uye kuyeuka kwehupenyu hwese. Huya kune nyama yebhiza remusango ine inonhuwirira garlic soso, yakasimba armpit nyama yenguruve ine yakanakisa crispy ganda uye yakapfuma bhekoni yemusango gadzira chinonaka chekunwa chirauro. Mushure mekusimudza girazi, zvakaoma kurega kudya, zvakaoma kurega kudya.
Imwe yakakwana yekuwedzera pfungwa ndeyokuti kuwedzera kune vashandi vanofarira, zvokudya zvinonaka zvisingabhadharwi, muridzi wacho anotsigirawo nekufungisisa kuronga zvirongwa zvemazuva ekuberekwa, mazano erudo kana mhemberero dzemuchato … vanoda kutora foni uye kufonera hotline. 0367371431 Saka iwe unogona kunakidzwa nevadiwa vako uye shamwari!
3. Northwest Sapa cuisine restaurant
Northwest cuisine restaurant, inozivikanwawo seThe Hill Station, ine nzvimbo inodhura, pa 037 Phanxipang street, Sapa town. Mugwagwa muzere nezvitoro zvakawanda zvakanaka nemakofi uye unokwezva vashanyi kuti vashanyire. Kero iyi iri nyore kuwana, kungofamba maminetsi matatu kubva kuchechi yematombo, padhuze neFanipan cable mota uye mumugwagwa unofamba uchidzika kunoshanyira Katsi Katsi musha.
READ 'Save' ngay 9 quán gà nướng muối ớt ngon nhất Sài Gòn | Excitinghochiminhcity
Pakati pemugwagwa wakabatikana uye wakabatikana, iyi ndiyo yega imba ine denga rematairi ine yakadzikama uye yekare chitarisiko. Magadzirirwo acho ari muchimiro chevanhu vedzinza repamusoro vane matanda ematanda nemadziro ematombo. Nzvimbo yekudyira inopfuura 200m2, inogara vaenzi vanosvika mazana maviri, ine nzvimbo dzemukati nekunze. Maonero epanoramic emupata wakanaka weMuong Hoa.
menyu Northwest Sapa Lao Cai cuisine restaurant akapfuma zvakanyanya, achigadzira ndiro dzinongove nemakomo ekuNorthwest chete. Zvinozivikanwa kuti shefu weresitorendi ane ruzivo rwekushanda mukicheni pane yakakurumbira 4-nyeredzi hotera system Victoria Sapa uye ariwo mwanakomana waYen Bai.
Vedette yechitoro ichokwadi A Pao’s kitchen buffalo, yakagadzirwa nemuridzi weresitorendi. Iri zvakare ndiro rakasarudzika, rine mukurumbira kwese uye rinotengeswa mune dzimwe nzvimbo dzakawanda. Ndakaedza maresitorendi akawanda asi nyama yenyati chete pano ndiyo ine kunaka kwakanyanya.
4. Dong Tien ruva -29 Cau May – Sapa – Lao Cai
Menyu yeresitorendi yakapfuma kwazvo nendiro dzinonaka kwazvo dzakagadzirwa nehuku, nyama yemombe, nenguruve. Nekudaro, iyo inonyanya kuzivikanwa hunyanzvi hweresitorendi isalmon saladhi uye poto inopisa.
5. Hoa Dao -48 Le Van Tam – Sapa – Lao Cai
Sapa Salmon Hot Pot
Nzvimbo yeresitorendi yakakura uye ine mhepo. Kunyanya kana iwe uri munhu anofarira kudya poto inopisa, kuuya pano ndiyo sarudzo yakakwana. Nekuti salmon inopisa poto inozivikanwa senhamba yekutanga kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Naizvozvo, nzvimbo ino yakayerwa nevashanyi vazhinji seimwe yeayo the inonaka yekudyira mu sapa 2020.
6. Chapa-40 Cau May – Sapa – Lao Cai
Iyi zvakare imwe yeiyi zvinonaka zvekudya mu sapa. Chinhu chakasarudzika ndechekuti nzvimbo yebhawa yakanyanyisa kutonhorera, yakakodzera mhuri kana mapati ekuzvarwa. Pamusoro pezvo, nzvimbo ino zvakare ine mukurumbira wakanyanya kune yayo sturgeon hotpot inonaka uye inotapira, ine kunhuwirira kwakasimba kweguta regomo.
7. Mr. Duc Sapa – 47 Xuan Vien – Sapa – Lao Cai
Northwestern specialty yakaoma nyama yenyati
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Ongororo yemaresitorendi anonaka muSapa wozoshanya kuno. Iresitorendi iyi inopa zvakawanda zvinonaka sechibage chemugomo, mhiripiri yenguruve, Northwestern ginger braised pork, Northwest sourdough nyama yemombe, nyama yakaomeswa yenyati, veal yakanyikwa muvhiniga, uye yakarungwa nyama yenguruve.
8. Sapa Silver Waterfall Restaurant – Km 12 Thac Bac nzvimbo yevashanyi – Sapa
Chikafu chiri muresitorendi chinonaka chose, sevhisi yacho ine shungu. Inonaka yekudyira muSapa inonyanya kuzivikanwa kunyanya salmon nehove dzakabikwa dzakabikwa seyakagochwa, poto inopisa, saladhi. Kunyanya marudzi maviri aya ehove anogadzikwa pano nounyanzvi, kwete hove.
9. Hoang Minh -23 – 24 Food court Sapa – Sapa – Lao Cai
Thang co chikafu chemugomo chinonaka
Iresitorendi iyi ine nzvimbo yakanaka uye inoshandira hunyanzvi hwekuNorthwest senge yakakangwa Ban Nguruve, huku yakakangwa, soup ine howa uye tofu, Thang Co, Lam mupunga, nyama yemhuka yakakangwa ine chili uye nyama yenguruve yakagochwa.
READ Chè bắp Hội An - Công thức chuẩn vị và dễ làm tại nhà | Excitinghochiminhcity
10-Moment Romantic- 026 Muong Hoa, Sapa, Lao Cai
Inonaka yekudyira muSapa inyanzvi muThang Co inopisa poto, pamusoro pechikafu chinonaka, maitiro ebasa evashandi ane shungu uye ane hushamwari, nzvimbo yeresitorendi yakapamhama uye inotonhorera, yakanyatsokodzera vashanyi vanoda kushandirwa mukunyaradza kwavo. kumba, airy. Saka zvinogona kutaurwa kuti iyi i chikafu chinonaka mu sapa izvo zvausingafaniri kufuratira.
11- Moment Romantic pa26 Muong Hoa – Sapa
Zvokudya zvose zvakarungwa zvakanaka kwazvo. Saka zvechokwadi kuuya pano kuchave chiitiko chikuru kwauri.
12- Lacasa Viet Cuisine Restaurant pa14 Cau Chivabvu – Sapa
Iyo inopisa yeresitorendi, inozivikanwa nekunaka kwayo, ndiyo Pizza. Kune zvakare poto inopisa uye mamwe akawanda madhishi esarudzo yako.
13- Sapa Lotus pa34 Cau Chivabvu – Sapa
Iyi nzvimbo yakakodzera zvose zvemangwanani uye kudya kwemanheru. Kana iwe ukapfuura chikafu chinonaka muSapa Mangwanani ano unogona kunakidzwa nebuffet, kana manheru unogona kuraira sturgeon inopisa poto.
14- Little Sapa Restaurant pa18 Cau Chivabvu – Sapa
Kana iwe uchida kudya nyama yenguruve, dhadha neuchi hwegoridhe, yakagadziriswa katsi kabichi, mambo soup, iwe unofanirwa kuuya kuresitorendi iyi kuti udye uye unakirwe.
15- Song Nhi Restaurant muSilver Falls – Sapa
Salmon dish paSong Nhi – Silver Waterfall
Ndichiri kudya uye kuona Silver Waterfall mujinga megomo, ino inzvimbo yakanaka. Menyu inoyevedza yechikafu ine zvakawanda zvemakomo zvakaita se: Nyama yenguruve yakagochwa, mupunga webhuruu, waini tsvuku yepramu…
16- Red Dao resitorendi pa4B Thac Bac
Inonaka yekudyira muSapa Nzvimbo iyi ichiri munzira yekuenda kuSilver Waterfall, asi kwete kumusoro kune Red. Nzvimbo iri pano ine hushamwari uye ine rustic ine chikafu chinoyevedza chemugomo semhembwe, nguruve yemusango nemhando dzakawanda dzemiriwo yemusango inotonhorera.
Sapa miriwo yesango inosvina muriwo
17- The Hill Station Singnature Restaurant pa37 Fansipan – Sapa
Iyi inzvimbo yekuona dhorobha remugomo uchidya uye nekumbozorora uchinwa kofi. Kana chitoro chakagadzirirwa kusanganisa 2 mu1, zvese zviri zviviri cafe uye nzvimbo yekudyira.
18- Red Camelia Resitorendi pa30 Cau Chivabvu
Resitorendi paSapa inofamba mugwagwa, yakanakira vashanyi kuti vamire mushure mekunakidzwa. Kunyanya kana iwe ukauya kuSapa munguva yechando, usazvidya moyo nekuti nzvimbo ino yakashongedzerwa nechoto kuti iwe unakirwe nechikafu nerunyararo rwepfungwa, uchigadzira kugadzikana uye kugadzikana kunzwa.
19- Delta resitorendi pa33 Cau Chivabvu
Chitoro ichi chinoshanda muItaly pizza, saka chikafu ndechemhando yakanaka, ichivimbisa kugutsa vashanyi vazhinji kubva kuEurope kuenda kuAsia.
Famous inonaka pizza
Saka da hutsva hweWesternized cuisine senge pitsa yegungwa, soseji, yakasanganiswa, nyama yemombe… unorangarira kushanya. chikafu chinonaka muSapa izvi.
20- Aroma restaurants Pizza padyo neCau May, Sapa dhorobha
Sapa ndiyo nzvimbo iyo denga nenyika zvinosangana, kana iwe uchida kutora ese akanaka maficha mumaziso ako kana uchidya, yeuka kushanyira iyi resitorendi.
Nekuda kwehupamhi, hwakanaka, maonero ane mhepo uye chikafu chakasiyana, zvinoenderana nezviitiko zvakawanda, nzvimbo yekudyira inzvimbo inogaro vashanyi kuti vanakirwe nezvinonhuwira hotpot, musango bamboo nhungirwa …
Chikafu muSapa chinogara chakasiyana
21. A Phu Restaurant -15 Fansipan – Sapa – Lao Cai
Iyi iresitorendi ine nzvimbo yakanaka, nzira iri nyore yekuenda mudhorobha reSapa. Chinhu chinonakidza ndechekuti iyo yekudyira inogara ichipa akawanda ane mukurumbira madhishi akadai sesaumoni yakagochwa, salmon hotpot, marasha ehuku, huku nhema yakabikwa nemishonga yechivanhu,
22. Do Quyen Restaurant – Kero: Fansipan peak – Sapa – Lao Cai
Inonaka yekudyira muSapa Nzvimbo iyi ine nzvimbo yakachena kwazvo uye ine mhepo, inova nzvimbo inonakidza yekunakidzwa nekuona panoramic yemakore nedenga muSapa. Nekuti iri pamusoro peFanipan. Kunyanya, chikafu cheresitorendi chinonaka uye maitiro ebasa anogamuchirwa zvakanyanya.
Chikafu paDo Quyen restaurant
23. A Quynh -15 Thach Son – Sapa – Lao Cai
Chitoro ichi chine mukurumbira weThang Co, hunyanzvi hwevanhu vedzinza. Chaizvoizvo ndiro rakagadzirwa nenyama yebhiza. Gare gare, yakagadziridzwa kuwedzera nyama yemombe uye yenguruve. Iyo inonyanya kunakidza poindi ndiro yeThang Co pa chikafu chinonaka muSapa Izvi zvakabikwa zvakanaka kwazvo, nyama ine nyoro, inotapira, inongodyiwa.
Pamusoro pane Ongororo yemaresitorendi anonaka muSapa nokuda kwereferensi yako. Tariro nekugoverana kwepamusoro kwe kenhhomestay.com ichakubatsira iwe kufamba kunonakidza muSapa
Taura kwakabva kenhhomestay.com paunenge uchitumirazve chinyorwa ichi
← Những câu Caption, STT thả thính, thơ thả thính cực mạnh | Excitinghochiminhcity
Khu du lịch sinh thái Cần Giờ | Excitinghochiminhcity →